Madaxweynaha Jubaland oo wadahadal ugu baaqay Madaxda DFS. – Banaadir Times
By banaadir 7th March 2020 132
Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) oo furay kalfadhiga 2aad ee baarlamaanka maamulka Jubaland ayaa kahadlay arimo badan oo laxiriira khilaafka maamulkiisa iyo madaxda dowlada federaalka Soomaliya.
Madaxweynaha Jubaland ayaa dowlada Qatar ku eedeeyay inay lacag badan kubixiso khilaafyada udhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo kuwo DFS dhanka kale waxa uu si xoogan ooga hadlay dagaalkii ka dhacay Beledxaawo isagoona nasiib daro ku tilmaaamy in deegaano laga xoreeyay alshabaab ay dib isugu dagaalaan ciidamo kawada tirsan dowlada federaalka Soomaliya.
Ugu danbeyn Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaliya ayuu ugu baaqay wada hadal inuu layeesho madaxda maamulgoboleedyada islamarkaasna lasoo afjaro khilaafka ka dhex taagan.
Baarlamaanka Jubbaland ayaa fasax dhawaan galay, kadib markii kalfadhigii 1-aad ay ku doorteen Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo Natiijada Doorashadaas iyo dhismahoodaba waxba kama jiraan ku tilmaamtay DFS.
Nin isku dilay magaalada Muqdisho.
By banaadir 30th August 2018
Shirkii wadatashiga doorashooyinka oo uu ku baaqay Farmaajo oo dib u dhacay
Jubbaland oo faahfaahisay Safarka Madaxweynaha ee Muqdisho iyo cida sugi doonta Ammaankiisa